Soo dejisan Pokemon GO 0.37.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Pokemon GO
Pokemon GO – ciyaar caan la geolocation iyo technology xaqiiqada dheeraad ah. Hawsha ugu wayn ee ciyaaryahanka waa in la qabsado dhul socod aan dhab loo yaqaan Pokemon. Si ay u helaan aad u baahan tahay inaad soc adduunka dhabta ah. Pokemon GO ayaa map ka dhisay-in si ay u sahamiyaan meelaha aan la garaneyn oo ku safraan jidadka magaalada iyaga oo raadinaya Pokemon qarsoon. In geeddi-socodka of helo khalqiga, ciyaaryahan ogaan kartaa gunno kala duwan iyo dhiman waayo Pokemon. Sidoo kale in GO Pokemon waxaa awood u leh inay labaduba ka dhanka ah ciyaartoyda kale iyo in dagaal weyn ee u dhexeeya kooxaha ka qeyb qaataan.
Search of xayawaan khayaalka in goobta dhabta ah
ururinta badan oo Pokemon
Tababarka iyo horumar khalqiga
Dagaalka ka dhanka ah ciyaartoyda kale
Ku biirista in xisbiyadii
Soo dejisan Pokemon GO
Faallo ku saabsan Pokemon GO
Pokemon GO Xirfadaha la xiriira